Namory ireo tompon’andraikitry ny fokontany avy amin’ireo fokontany miisa 27 ny delege sy ny lehiben’ny distrika ao amin’ny boriborintany fahadimy. Nantsoina nandritra ity fivoriana ity ireo tompon’andraikitry ny fokontany nahitana ny lehiben’ny fokontany, ny lefiny, ny sekretera ary ny mpitantsoratra ao anatin’ny fokontany miisa 27.
Nitarika izany ny delegen’ny boriborintany, Rakoto Emmanuel Richard, sy ny lefiny, ny lehiben’ny distrikan’ny boriborintany fahadimy, ny tompon’andraikitra avy eo anivon’ny sampandraharaha misahana ny lalàna eo anivon’ny fiadidiana ny tanànan’Antananarivo.
Hamerenana indray ny lazan’ny Mimoza sy ho fiarovana ny tontolo iainana, hiatrehana ny fiovaovan’ny toetr’andro. Io ny tanjona lehibe antom-pisian’ny “Festival Mimoza” ho an’ny distrikan’Ambatolampy.
Hetsika zavakanto ary filaharambe naneho ny loko marevaka mavo lokon’ny Mimoza ny nentina nanamarihana izany tany an-toerana, ny herinandro teo. Manana ny tantarany ary nitondra fampandrosoana ho an’ny distrikan’Ambatolampy raha ity zavamaniry « Mimoza » ity noho izy niantoka ny fampandehanana ny lamasinina tamin’ny andro taloha. Zavamaniry tsy nisy teto an-toerana ny mimoza fa avy any ivelany no nafafy tao Ambatolampy.